अवसर र चुनौतीको वर्ष रह्यो | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / अवसर र चुनौतीको वर्ष रह्यो
अवसर र चुनौतीको वर्ष रह्यो
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता July 11, 2018	0 148 Views
बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष
राज्य पुनर्संरचनापछि स्थापित स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधि आएको वर्ष दिन भयो  । नया संरचनामा भने जस्तै गरी काम गर्न गाह्रो नै हुन्छ । जनताको विकासको अपे क्षा स्थानीय तहको क्षमता भन्दा धे रै छ । तर पनि क्षमताअनुसारका विकासे काम र नीतिगत व्यवस्था स्थानीय तहले बिते को एक वर्षमा गरे का पनि छन् । बिते को एक वर्ष कस्तो रह्यो ? यसै सन्दर्भमा बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओ लीसँग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सार संक्षे प यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
एक वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
यो एक वर्षलाई हामीले अवसरको रुपमा लिएका छौ ं भने धे रै चुनौ तीहरुको पनि सामना गर्नु परे को छ । अवसर र चुनौ ती दुवै हाम्रा अघि दे खापरे  । त्यसै ले एक वर्षको अवधिमा हामीले नया“ कार्यको थालनी पनि गरे का छौ ं । विशे षगरी विकास निर्माणमै के न्द्रित रहे र कामहरु भएका छन् । नीतिगत कुराहरु पनि छन् ।
नीतिगत कुरामा हामीलाई प्रायः चुनौ तीकै रुपमा दे खापरे  । स्थानीय तह स्वायत्त छ भनिएको छ तर फे रि त्यो स्वायत्ततालाई पुराना ऐ न नियमावलीतेस्र्याएर अवरो ध गनेर् काम पनि भएको छ । नीतिगतरुपमा हामी समस्यामै छांै  । विकास निर्माणका बारे मा पनि जनताका अपे क्षा धे रै छन् । कामको हिसाबले पनि हामीले त्यो काम गर्नुपनेर् छ । स्रो त साधन हामीस“ग छै न । त्यसै ले जनताको अपे क्षाअनुसारको काम हामीले गर्न सके का छै नौ ं । तसर्थ विकास निर्माणमा पनि चुनौ तीका पहाड कम्ति छै नन् ।
बिते को एक वर्ष सम्झनयो ग्य कि बिर्सन ?
चुनौ ती रहे पनि अवसर पनि सगसगै आउछन् । हामीले के ही अप्ठे राका बीचमा पनि के ही नया काम गरे का छौ ं । तसर्थ बिते को एक वर्ष सम्झनयो ग्य नै छ । हामी निर्वाचित भएर आइसके पछि दुई तीनवटा कुरा सम्झनयो ग्य छन् । पहिलो कुरा गाउ पालिकाका विकट वस्तीको वस्तुस्थितिका बारे बुझ्ने , जनताका वास्तविक समस्या के छन् बुझ्ने अवसर मिले को हो ती समस्याको समाधान तत्काल गर्न नसक्ने र जनताको चाहना छिटो समाधान हो स् भन्ने कुरा अहिले चुनौ तीका रुपमा देखिएका छन् । त्यस्तै द्वन्द्वपीडितको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्यको समस्या, कृषिका समस्या दे ख्दाखे री पीडाबो ध हुन्छ । पीडाबो धका साथ एक बर्ष बिते को छ ।
नमूना काम के गर्नुभयो ?
बंगलाचुली गाउपालिका पहाडी क्षे त्र हो  । यसको के न्द्र कमिरे चौ र हो  । प्रत्ये क वडालाई कमिरे चौ रसग जो ड्नका निम्ति बाटाघाटा थिएनन् । साविक हासीपुर हाल बंगलाचुलीको वडा नं. ७ र ८ मा हामी चुनावकै बे ला जा“दा पनि कि प्युठान भएर कि त घो राही भएर जानुपथ्योर्  । अहिले हासीपुर क्षे त्रसग गाउपालिकाको के न्द्र जो ड्न गणतन्त्र मार्ग निर्माण गरे का छौ ं । त्यस्तै साविक स्यूजा हाल वडा नं. १ र २ सग गाउपालिकाको के न्द्रलाई जो ड्यौ ं । भित्र पनि हामीले एउटा कृषि सडक जो घो राहीको मसिनाबाट मपेर् स हु“दै बडीपो खरा पुरुङ हुदै दाङबाङ जो ड्दै गनारी, मसुरे हु“दै मुर्कुटीसम्म बाटो निर्माण तथा सञ्चालन गनेर् काम पनि भएको छ । अकोर् गढी ले कलाई उजागर गनेर् काम गरे का छौ ं । ऐ तिहासिक महत्व बो के को ले क हो  । गढीले कमा पुग्ने जो को हीले किल्लाको अवलो कन गर्न सक्ने भग्नावशे षहरु अहिले पनि छन् । त्यस्तै सिंगो दाङ र हिमालय श्रृंखलाहरु दे ख्न सकिन्छ । यसलाई पर्यटकीय क्षे त्रको रुपमा विकास गनेर् कामको शुरुवात भएको छ ।
त्यस्तै घो राही–दे वीस्थानसम्मको सडक ओ झे लमा परिरहे को अवस्था थियो  । स्थानीय तहस्तरबाट हामीले पहल ग¥यौ ं र के न्द्रमा सभामुखले पहल गरे र यो सडकलाई मदन भण्डारी मार्गभित्र पार्न सफल भएका छौ ं । घो राहीदे खि दे वीस्थानसम्मको सडक कालो पत्रे हुने प्रक्रिया आरम्भ भइसके को छ । यो पनि महत्वपूर्ण उपलव्धिकै रुपमा लिएका छौ ं । यस्तै शै क्षिक क्षे त्र सुधारका लागि धे रै पहल गरे का छौ ं तर शिक्षा नियमावली २०२८ लगायतका नियमावलीहरुले हामीलाई अवरो ध सिर्जना गरे को छ । यसलाई निष्क्रिय र खारे ज गनेर् काम संघीय संसदले गनेर् भएकाले हामी पखेर् र बसे को अवस्था छ । त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षे त्रमा पनि यसै वर्षदे खि १५ बे डको अस्पताल सञ्चालन गनेर् यो जना थियो तर स्रो त साधनको कमीका कारणले यसै वर्षदे खि सञ्चालन गर्न सकिएन । प्रदे श सरकारस“ग अनुरो ध गनेर् र अस्पताल सञ्चालनका लागि पहल गनेर् नीतिगत निर्णय गरिसके का छौ ं ।
असारे विकास जनप्रतिनिधिहरुले पनि तो ड्न सके नन्, किन ?
भनाइ, प्रचारमा असारे विकास भनिएको छ यसमा म चाहि“ सहमत छै न । किनभने कामको शुरुवात पुस, माघ, फागुनबाटै भइसके को हुन्छ । सिस्टम उपभो क्ताहरुलाई पे श्की नदिने छ । जनताले विकासका लागि कहा“बाट ल्याएर विकास गर्छ ? समस्या छ । निर्माण सामग्री जुटाउ“दै काम गदैर् गरिरहे कै हुन्छन् । काम सके पछि भुक्तानी लिन पनि कागजी प्रक्रिया मिलाउन उपभो क्ताहरुलाई उत्तिकै समय लाग्छ । काम जे ठको पहिलो हप्तामै सकिएको हुन्छ । यावत प्रक्रिया पूरा गर्न उपभो क्ताहरुलाई समय लाग्छ र भुक्तानी असारमा आएर हुन्छ । भुक्तानी असारमै हु“दा त नीतिगतरुपमा असारमै पै सा निकासा भयो , खर्च गरियो भन्ने हो ला । कामको थालनी माघ, फागुनदे खि नै हुन्छ । त्यसै ले यसलाई असारे विकास भने र प्रचार गर्नुमा कुनै सत्यता छै न म सहमत छै न । असारे विकास हो इन, असारमा भुक्तानी लिएको मात्रै हो  । जुन दिन भुक्तानी हुन्छ उही दिन विकासे काम पनि भयो भन्ने सो च्ने हरु नै गलत छन । उही दिन काम सके र उही दिन भुक्तानी माग्ने काम हु“दै न । त्यो कुरा सबै ले बुझ्न जरुरी छ ।
दुईवटा गाउसभा पनि गरिसक्नु भो , यसपालि नीति कार्यक्रम के छन् ?
नया“ नीति कार्यक्रम बनाउन पुराना नीति निष्क्रिय बन्नुपर्छ । नत्र पुरानो लाई बो के र नया नीति कार्यान्वयनमा समस्या छ । यहा त कहा ने र कमजो री भयो भन्ने खो जे र अदालतसम्म धाउने हरु पनि पखेर् र बसे का छन् । यो अवस्थामा पुराना नीतिहरु निस्क्रिय गनेर् वा खारे ज गनेर् काम पहिले हुनुपर्छ । हामीले बनाएका नीतिहरुलाई पुराना नियमावलीले विस्थापित गनेर् काम भइरहे को छ । त्यसो हो भने हामीले किन बनाउने ? यसको सहजीकरण गनेर् काम संघीय संसद र प्रदे शले सल्टाउनका लागि काम गर्नुपर्छ । संघबाट पुराना नीति खारे ज भएको भन्ने कुरा जहिले आउछ त्यसपछि स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्छौ ं ।
बजेट कति ल्याउनुभयो ?
सशर्त, समानीकरणलगायतबाट गरी ३२ करो ड ८० लाखको बजे ट नया आर्थिक वर्षका लागि विनियो जन गरिएको छ ।
बजे टको प्राथमिकता के हो ?
बजे टको प्राथमिकता सडक नै हो  । मानिसहरुको आवतजावतलाई मध्यनजर गरे र सडकलाई प्राथमिकतामा राखे का छौ ं । त्यस्तै शै क्षिक क्षे त्रलाई अलि सुधार गर्न सकिन्छ कि भने र शै क्षिक क्षे त्र सुधार कार्यक्रम ल्याएका छौ ं । त्यस्तै सिंचाई र पर्यटनलाई पनि बजे टले प्राथमिकता दिएको छ । हाम्रो प्राथमिकता भने को सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र पर्यटन परे का छन् ।
विकट क्षे त्र धे रै छन्, । कतिपय ठाउमा फो न चल्दै न, प्राथमिकतामा सञ्चार किन परे न ?
सञ्चारलाई पनि प्राथमिकतामा राखे का छौ ं । टे लिकमलगायतका दूरसञ्चारका क्षे त्र अलि नाफामुखी रहे छन् । हाम्रा गाउवस्ती
अलि पातला छितरिएर रहे का छन् । हामीले हारगुहार पनि गरे का छौ ं । सवेर् क्षणमा पनि जानुभएको छ । से वाग्राहीको वस्ती पातलो हु दा त्यो बाट फाइदा कमआउने दे खियो  । त्यही भएर अहिले सम्म टे लिकम वा त्यस्तै दूरसञ्चारका क्षे त्रहरु त्यहा“ पुगे र पनि से वा विस्तारमा कञ्जुस्याइ“ गरिरहे को अवस्था छ । उनीहरु शहर के न्द्रित छन् । हामीले प्राथमिकतामा राख्दा पनि उनीहरु गाउ“मा जा“दै नन् । तसर्थ म यही मिडियामार्फत भन्न चाहन्छु कि सबै ठाउ“मा नाफा खो जे र हु“दै न । से वाका लागि काम गर्नुपर्छ । सम्बन्धित पक्षलाई मे रो आग्रह छ सबै व्यापारमा फाइदै फाइदा हु‘“दै न । बंगलाचुलीका विकट वस्तीमा टे लिफो न से वा विस्तारका लागि सबै ले सहयो ग गर्नुस् ।
बंगलाचुली जडीबुटीको क्षे त्र पनि हो । त्यसको सदुपयो ग कसरी गर्नुभएको छ ?
हो  । बंगलाचुलीमा जडीबुटी पनि छ । जस्तो टिमुर, सुगन्ध को किलालगायतका जडीबुटी पाइन्छन् । त्यसै ले गाउ“पालिकाले त्यस्ता जडीबुटीहरुको संरक्षण गनेर् र बिरुवासमे त उत्पादन गरे र किसानहरुलाई वितरण गनेर् कुरा नीतिगतरुपमै निर्णयगरे र अघि बढे का छौ ं । यो सगसगै बंगलाचुली समुन्द्री सतहदे खि साढे तीन सयदे खि १८ सयसम्मको उचाइमा रहे काले ती क्षे त्रहरुमा उचाइअनुसार फलफूल खे ती गर्नका लागि गाउ“पालिकाले कार्यक्रमहरु बनाएको छ । जस्तो यसपालि पनि
चार हजारजति सुन्तलाका बिरुवा रो प्ने काम भएको छ ।
त्यस्तै कुनै ठाउमा के रा, अलै ंची उत्पादनका लागि पके ट क्षे त्रको विकास गर्न कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने जमकोर् गरिरहे का छौ ं । किसानहरुलाई उत्पादनको क्षे त्रमा जो ड्ने गाउ पालिकाको यो जना छ र अकोर् कुरा बंगलाचुलीमा के ही खानी क्षे त्र पनि छ । विशे षगरी चुनढुंगा पाइन्छ यहा । स्थानीय स्रो त साधनलाई उपयो ग गनेर् नीतिमा छ । तर त्यस्तो व्यवस्था हु“दाहु“दै पनि ठूलो भने का जनता हुन् । जनतालाई बचाएर मात्रै खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मा हामी छौ ं । जनताको बसो बास सुनिश्चित नगरी उत्खनन गनेर् काम हुन सक्दै न । जनताको बसो बासको ग्यारे न्टी हुन सके न भने खानी नचल्न पनि सक्छ ।
Previous: मुख्यमन्त्रीसँग स्थानीय तहका प्रमुखको गुनासो , ‘ऐन परिवर्तनले समस्या आयो’
Next: डागीबन्धु ट्रष्टको आठौं महाधिवेशन